အာမခံပေါ်လစီလျှောက်ထားခြင်း | Grand Guardian Insurance
"သင့်အနာဂတ် လုံခြုံမှုအတွက် ဂရင်းဂါးဒီးယန်း "
လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု | အာမခံပေါ်လစီ လျောက်ထားခြင်း
ကျွနု်ပ်တို့မှ ပေါ်လစီလျောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား စီစစ်သေချာစွာလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေတို့မှ ပေါ်လစီတွင် ပါရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများအား အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ ၀ယ်ယူထားသော အာမခံပေါ်လစီများအား အခက်အခဲ မရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်သော နည်းလမ်းများစွာအား ထားရှိပေးပြီး၊ မိတ်ဆွေတို့ဘက်မှလည်း လိုအပ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာများရှိသော် ကျွနု်ပ်တို့အား အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပေသည်။ မိတ်ဆွေတို့အား စိတ်အေး ချမ်းသာမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်ရန် ဂရင်းဂါးဒီးယန်းမှ ပေါ်လစီတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများအား ပေးဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့မှ လုံခြုံမှု ကိုပေးဆောင်သည် သာမက ရိုးရှင်း၍ တိကျမြန်ဆန် လွယ်ကူသော လျော်ကြေးလုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် လျော်ကြေးများအား အချိန်တို အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့မှ မိတ်ဆွေတို့ လိုအပ်ချိန်တွင် အစဉ်အမြဲ အသင့်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်လှသော အကြံပေးများမှလည်း မိတ်ဆွေ တို့အား အာမခံနှင့် ပတ်သက်သော အကြံဉာဏ်များအား ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အာမခံ လျောက်ထားမှုများအား အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ အရည်အချင်း ပြည့်ဝမှုနှင့် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှုရှိသော အာမခံကိုယ်စားလှယ် ကွန်ယက်များ၊ ကျွနု်ပ်တို့ ကုမ္ပဏီ ၏ ငွေရေး ကြေးရေး တောင့်တင်းခိုင်မာမှုနှင့် သင်၏အာမခံနှင့် ပတ်သက်သော လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်စည်းပေးနိုင်မှုတို့မှာ ကုမ္ပဏီ ဆက်လက် ကြီးပွားစေရန် အထောက်အကူများစွာ ပြုထားပါသည်။ ယင်းပေါ်လစီများမှာ အသက်အာမခံ၊ အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ် အာမခံ၊ မီးအာမခံ၊ ငွေပို့ငွေသယ် အာမခံ၊ အစ ရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
အာမခံပေါ်လစီ လျှောက်ထားရန် လျာထားခြင်း
အာမခံကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) ဂရန်းဂါးဒီဒယန်း ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
Grand Guardian Verifies information
An agent will arrange to meet up with you. He/She will introduce Grand Guardian, his/her role and types of insurance policies we provide
An agent will recommendapolicy and other alternatives your alternatives to your objectively. The agent will explain to you the basis of his recommendation, the fees and the benefit of the policy. he/She is also responsible for addressing all your questions and concerns regarding the policy at this point.
Before recommendingapolicy to you, the agent will first understand your needs and your finicial status.
You are expected to evaluate the recommendation and alternatives given and select the appropriate policy for yourself before purchase
Upon the verbal, the agent will agent for all necessary checkups or assessments for you
Sign policy contract and commence policy
+95-1-230 5700, 95-1-230 5701
No. (19/20) A, B, C, D, Junction Square Compound,
ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
© 2016 - 2017 Grand Guardian Insurance Public Co.Ltd. All Rights Reserved.